Sababtoo ah bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan – Waxa aniga iigu fiican aniga ma ahan mid kugu habboon. Bog hordhac ah oo ah 5 – 20 bixiyaiya martigelinta webka ee ugu wanaagsan ayaa laga yaabaa inay faa’iido u yeeshaan kuwa isku soo ururinaya liistada dukaamaysiga; Dukaanleyda halista ah ee u baahan inibsadaan martigeliyaha shabakadda ASAP waxay u baahan doonaan faahfaahin dereeraad ah.
Eegistayada martigelinta, Waxaan doortey shirkadaha ugu fritan martigelinta webka ’10’ dan:
Waxaan u eegi doonnaa si shaqsi ahaantaana və barbardhigi doonaa kiisaskooda qala duwan ee boggan ku yaal.
1 10 Şirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican: Pros-vs-Cons & Hökm
1.3 5. So dhaweynta
2.1 1. Waxa ugufiican Range Hosting oo kaladuwan
2.1.1 Şabakada Martida Wadaagga
2.2 3. Marti gelinta Websaydhka Degdegga ah / Xawaaraha ugu Wanaagsan
2.3 4. Bogga ugu Fiican ee Martigaliyayaasha
2.3.1 Talo: Ma dooneysaa jawi horumarineed oo gaar ah oo ku saabsan martigelinta la wadaago?
2.4 5. Ugu Fiican Ganacsiga Yar-yar-Dhexdeeda
2.5 8. Adeegyada bilowga ah ee martigelinta-bilowga ah
2.5.1 Marti gelinta Websaydhka Shaqsiyeed və Fiican: GreenGeeks, Soo dhaweynta, TMD Hosting Sida marti-gelinta qorayaasha, degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa orta la awoodi karo oo si fudd loo isticmaali karo. La Daabaco-da ay tahay in CV-gaaga ama kor u qaadista ‘astantaada shakhsiga ah’ – Dhisme si sahlan loo isticmaali karo, astamaha websaydhka, iyo qiime-dhimista la awoodi karo ayaa ah kuwo ahad muhiim geliyaha websaydhka shaqsiyeed. Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet, Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban ($ 0.80 / ay diiwaangelinta). TMD Hosting və ya GreenGeeks mumi bixiyaan mumi qanaxma və lakayin mumi martigeliyaan xadidneyn waxayna bixiyaan taageero macaamiil ya wanaagsan. İstiğmaalayaasha Boqortooyada’nın Fiçikalı Martı Günü: Kinsta, SiteGround Si loo fahmo waxa ka dhigaya websaydhka ugufiican goobta gaar ah, waxaan ubaahanahay inaan ka wada hadalno qarsoodi. Waa maxay qarsoodi?
2.5.2 Maxaa loo baahan yahay la daahida?
2.6 12. Waxa ugufiican Websaydhada Malaysiya & Küveq Sinqapur
10 Şirkadaha Marti-gelinta Websaydhada ugu Fiican: Pros-vs-Cons & Hökm
Shirkadda LA-ku salaysan oo lagu aasaasay 2001. Sidoo kale iska leh oo maamullo Web Hosting Hub.
Daahfurka: $ 3.99 / aya
Tilmaamo açarı: Domain pulsuz, bir neçə gün əvvəl, e-poçt martigalinta, Auto-SSL, bu gündən etibarən 90 gün davam edəcək.
Sicirka qiimaha ayaa kordha marka koowaad.
Kumbuyuutarku ma shaqaynayo – xaqiijinta telefoonka.
InMotion Hosting Waxaa aasaasay Sunil Saxena və Todd Robinson ilə 2001. Los Angeles, CA, Virginia Beach, VA və Denver CO, Los Angeles, CA, Ashburn, VA və daha çox satılanlar..
Waxay sidoo kale leeyihiin ya ay maamulaan Web Hosting Hub waxaana haatan shaqaaleysiiya shaqaalaha 300 shirkadooda.
InMotion Hosting və Haqda Həqiqi HostScore HostScore təqdim olunur və MartMadada InMotion VPS ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz..
InMotion Hosting waxay ku jirtay ciyaarta martigelinta ku dhawaad ​​20 sənayesi – rikoorkooda ganacsi ee mudada dheer waxay cadeeyeen inay yihiin mid ka mid ah bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican suka.
Waxyaabo yar oo ka dhigi kara InMotion Hosting ayaa ah midkoodii ugu sarreeyey (taas oo iyo jeer hela> 99.98% waqtigeedii) və ya taageeradooda macaamiisha ah. Həddi-qəbri mum ilə bağlamışam, ama wax weydiin, taageerada macaamiishooda iye jeer waxay si deg-deg ah uga jawaabaan.
Shirkaddu waxay soo bandhigaysaa seddex qorshe martigelin oo la wadaago oo weyn oo loogu talagalay websaydhyada yaryar oo dhexdhexaad ah; iyo sidoo kale VPS və ya heellan marti-gelinta bogag waaweyn.
Halkan ka akhri dib-u-eegiste buuxa ee InMotion Hosting
Dammaanadda qiimaha qiimaha ee wadajirka ah yao VPS martigelinta.
Socdaalka bogga bilaashka ah ee dadka isticmaala mudnaanta kowaad.
100% hazırlıq macaamiisha ee guriga.
Guriga gudahiisa ku jira fayras soo saaray iyo iskaanka baarista.
Isku gün kaliya $ 0,01 (qiymətdən çox: WHSRPENNY)
Marti gelinta gudaha ee gudaha ayaa u Fiican shaqsiyaadka mum qara iyo ganacsiyada yaryar. Shirkadaha waaweyn ya Вебeydhada leh tarafafada culus – VPS və adeegayaasha ku saleysan NJ waxay bixiyaan xal aad u dabacsan.
Waxaa laga aasaasay 2004 koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda. Xafiisyada Bulgaariya, Talyaaniga, İspaniya, İngilis, Mareykanka.
Bilowga: $ 3.95 / aya
Tilmaamo açarı: Dhismo ku-meelaynta CMS-ga ah, mart-gelinta emaylka, HTTP / 2 La-kartiiyay, Aynu Encrypt Wildcard SSL.
SiteGround waxaa lagu aasaasay 2004 by koox ka mid ah saaxiibada jaamacadda Sofiya, Bolqarıstan. Tenant Nikolov, Reneta Tsankova, Nikolay Todorov, şirkadda waxaa madax ka ah.
Shirkadda ayaa tan iyo bilawday inay shaqaaleysiisay dadka 400 xafiisyadooda ku yaalla Bolqarıstan, İtaliya, İspaniya, Birləşmiş Krallıq, və ya Maraykanka. Waxay hadey leeyihiin xarumo xogeed oo 6 oo ku yaala Mareykanka, Hollandiya, Boqortooyada Midowday, və ya Sinqapur.
Dulmarka dib u eegista
Shirkad qala oo firfircoon, SiteGround waa mid ka ort ah shirkadaha yar yara ee ku dadaalaya bixinta adeegyo lagu kalsoonaan karo oo leh waxyaabo cusub.
Orta ka orta muuqaalkan ayaa ah Super Cacher, oo ah qalab dhisme oo la dhisay oo ka dhigi kara shabakadaha si dhakhso ah u shaqeeya. Muuqaal kale waa awoodda lagu rakibo SSL şifrələyək oo kaliya dhowr jeer oo fure ah, oo ka dhigaya orta aad ugu sahlan isticmaalayaasha si ay u helaan boggooda.
Kasta oo qiimahooda dib u cusboonaysiinta loo tixgelin karo mumi yar oo tallaabo ah, waxaa xaqiiq ah inay u qalmaan tayada martigelinta ee aad soo celiso. Saytda Ətrafdakılar və Habboon Yaxay Milkiilayaasha Ganacsiga və ya qara qua xirfadlayaasha ah ee doonaya xallinta dhibaatada walwalka aan walwalka lahayn.
Waxqabadka server adag – lagu qiimeeyay A dhammaan imtahan.
Yawiga deeanka – 300% martigelta cagaaran (qeybta sare ee warshadaha).
Qaab dhismeedka Bilaashka aho mawduucyada StudioPress.
Rakibaadda və ya SSL cusboonaysiinta.
U gourista Goobaha Bilaashka ah + Dhisme sahman loo isticmaalo dhiseyaasha.
Istiqmaalayaaşa kasta oo raadinaya xal marti u ah eko-saaxiibtinimo, yeni gələnlər, bloggerlər şaqsiyadeed, ganacsiyada yar-yar-yar, kuwa miisaaniyada isticmaala, kuwa madaxbanaan, ya ururada aan macaash doonka ahayn.
5. So dhaweynta
Aasaasay 2004, Hostinger waa shirkad martigelisa miisaaniyadeed oo ka shaqeysa xarumo badan oo xogta adduunka ah.
Hal wadaagay: $ 0.99 / ay
Premium La wadaago: $ 2.89 / aya
Ganacsi la wadaago: $ 3.99 / aya
Xüsusiyyətlər açarı: Domain pulsuz, dhisaha dhismaha cusub ee cusub, saxan .xyz raqiis ah, qorshaha martigelinta ugu raqiisan.
Taageerada qaybta ah ee rakibidda hal-tiirsan ee Qorshaha Wadaag ah.
Arnas Stuopelis, Hostinger waxaa markii ugu horreysay lagu aasaasay 2004 və ya şirkad "Mediaya ev sahibliyi" oo ku taala Kaunas, Litva. Dhawr sano ka dib, waxay sidoo kale bilaabeen 000Webhost, adeeg internet və ya lacag la’aan ah oo aan lahayn xayeesiin.
Inkastoo ay tahay shirkad martigelinaysa, Hostinger waxay leedahay xarumaha macluumaadka 8 oo ya yaal daafaha aduunka oo dhan iyadoo Sinqapur ay noqotey ugu dambeyntii. Waxay sidoo kale kugan suihihin wadamada 39 yol diiwaan-qaliye shaha indiki oo buuxa ICANN.
Tan iyo markii la aasaasay, Hostinger ayaa kor u qaaday shirkad furan oo caan ah oo ku faaneysa isticmaalayaasha 29 milyon oo leh celcelis ahaan 20,000 cubub ee adeegsadaha cusub maalin kasta dunida oo dhan 2017.
Furaha guushooda? Bixinta qiimaha tafaariiqda qiimaha leh ee qiimo jaban (orta ka orta ah kuwa ugu raqiisan suuqa, eeg miiska) dadka isticmaala.
Hantidhawrku wuxuu qiimeeyaa jeeg haddii aad rabto inta badan martigelinta ugu badan ee suurtogalka ah adigoon u baahnayn inaad ku dhufatid miisaaniyadada.
Faahfaahin intaa ka badan ka ogow dib-u-eegida qotoda dheer ee Martigeliyaha
Fiber u-fiicnaanta waxqabadka ugu wanaagsan ee server.
Vaxti kasta oo lacag ah damaanad ah.
Xulashada goobaha adeegga ee uzaq goobood.
Newbies, boggaga shaqsiyeed, ganacsiyada yar yara ve kwa dhexdhexaadka ah, isticmaaleyaasha miisaaniyada, kuwa madaxbanaan, ururrada aan macaash doonka ahayn, kuwa soo saarta websaydhka, adeegsadayaasha horumarsan ee Word, blog, blog, blog, blog, hack.
Waxaa lagu aasaasay 2007, TMD Hosting Waxay dabooshaa dhammaan xalalka martigelinta qala duwan: Paylaşılan, Satıcı, VPS Bulud, WordPress İdarə Edilən, Dedicated.
Qorşaha Bilowga: $ 2.95 / aya
Qorşaha İş: $ 4.95 / aya
Qorshe ganacsi: $ 7.95 / aya
Tilmaamo açarı: Domain bilmək, Weebly diaar, 60 qəpik istifadə etmək lazımdır, NGINX, Encrypt WildCard SSL, kök sicir-dhimis gaar “WHSR7”.
Marti gelinta TMD waxay ku dhaweyd in ka badan 10 sənaye waxaana loo tixgeliyey inay tahay xulasho la isku halleyn karo oo loogu talagalay kuwa u baahan bixiye marti-gelis web tayo leh.
Amyardam, TMD Hosting waxaa lagu abaalmariyey Xulashada Tifaftiraha PC faafiyay Mareykanka oo dhan iyo xarun xogta dibedda.
TMD Hosting waxay bixisaa qorshayaal martigelineed oo kala duwan, ya ay jiraan la wadaago, iibiyeyaal, VPS, məhsul, WordPress maamushay, adeegyo mart-gelin və ya heersare ah.
TMDHosting ma aha wax hagaagsan laakiin waxaan kuinanan talimayaa görə TMD Bogagga loogu talagalay bloggerlər və ya ganacsi yar-ilaa-dhexe ah oo u baahan xal marti-gelin web. Kaliya maaha inay bixiyaan bandhigyo xasiloon oo kumbuyuutareed iyo tan oo ah astamo waxtar leh, lakiin sidoo kale waxay leeyihiin qaar ka ort ah kooxda taageerada macaamiisha ugu fran ee warshadaha.
Haddii aad ka fekereyso Qorshaha Bixinta ee Wadaaga ah, waxaan kugula talin lahaa inaad tagto Qeybta Qorshaha Ganacsiga maaddaama kharashyada deraeraadka ahi ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin isku ortada ($ 9.95 $ / man.
Faahfaahin və ya baro dib-u-eegista TMD Marti-gelintaada
Mawduuca wanaagsan – taageerayaasha riixa ya dib-u-eegista wanaagsan meel kasta.
Goobta horumarineed ee saaxiibtinimo leh oo leh dayaktir maalinle ah.
Soosaarayaasha WordPress, yaxşı veb sayt və ya adeegsadayaasha WordPress e horumarsan.
Waxaa la aasaasay 2007, oo ay leedahay shirkad ay leedahay shirkadda Exabytes.
WP Muhiim ah: $ 17 / ay
Tilmaamo açarı: Bog bilaash ah .blog domain, HTTP / s & NGINX wakiil, shahaadada SSL bilaashka ah, 100 + mawduucyada WP ee bilashka ah, Jetpack shaqsiyeed / Xirfadlaha ayaa lagu soo daray.
Neyijooyin isku dhafan oo imtihaanka xawaaraha olupin Jason.
Maya 24 7 sheekaysan ama taageero telefonu.
Dhammaan shirkadda Cənub-Şərqi Asiya martigelinta shirkadda Exabytes, WPWebHost waxay bilaabeen safarkooda 2007 waxayna ujeedadoodu tahay inay siiyaan dadka isticmaala qalabka isgaarsiinta muhiimka aho xalal farsamooyinka e-mail.com-blog.
Waxay hadda leeyihiin laba xarumo xogeed oo ku yaal Denver, Co, və Sinqapur ilə ay və siiyaan xawaare xawli leh oo deg dega Maraykanka və Asiya Pasifik.
WPWebHost waa mid ka mid shirkadaha ugu fie ee martigaliya ee ku yaalla Koonfur Bari Asiya into ay ay su suqənyihiin ganacsi tan iyo 2007, waxay sii wadaan inay bixiyaan qiime macquul ah oo tartan ah ee loogu talagalta Word martress.
Qiimaha sare ee la awoodi karo wuxuu WPWebHost ka dhigayaa tixgelin mudan ee cusub ee doonaya rikoodh cusub oo raqiis və ya oo WordPress ilə oo la qabsaday laakiin leh miisaan yar.
Həəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə, ki, oradakı saxtaixin.
Waxqabadka server adag.
HIPAA-adeecida və ya martigelinta server-ka ciyaarta.
Saldhig aqoon ballaadhan oo loogu talagalay caawinta DIY.
Dammaanad bedelka Təchizat.
Hay’adaha horumarinta webka və ya geynta, adeegsadayaasha martigeliyaasha shirkada, websaydhada waaweyn ee ganacsiga, soosaarayaasha ciyaarta internet, internet, dukaanka internetka.
Marka xigta, bir isbarbar dhigno kiisaska adeegsiga ee shirkadahaan martigelinta qiimeynta sare leh.
1. Waxa ugufiican Range Hosting oo kaladuwan
Uğur Fiican Bogagga Weyn və Veb-saytlarda: A2 Hosting, InterServer, So dhaweynta
Arinka ku saabsan marti-gelinta websaydhka ee la wadaago, badiyaaaba waad ku xaddidan tahay tirada websaydhyada aad ku marti-gelin karto koonto kasta iyada oo ku xidhan qorshaha. Xisaabaadka martigelinta VPS ma laha xaddidmo domain laakiin waxaa loo kala soocayaa tirada Kheyraadka uu qorshe kasta leeyahay.
Şabakada Martida Wadaagga
ŞirkətWebsaydh 1 WebsaydhWebsaydhka 2-10 WebsaydhkaWebsaydhka aad xadidnayn
Xusuusin – Kinsta və LiquidWeb ma bixiyaan adeegyo mart-gelin wadaag ah.
ŞirkətHeerka GelitaankaHeerka dhexeİstifadə
Ogeysiis – qorshayaasha martigelinta VPS (ugu dhawaan) faahfaahinta: Heerka gelitaanka – 4 GB Ram, 75 GB kaydinta; Heerka dhexe – 6 GB Ram, 150 GB kaydinta; Horumar ah – 8 GB Ram, kaydinta 250 GB. InterServer waxay leedahay isku-xirnaanta server-ka ugu dabacsanaanta maadaama ay iska leeyihiin / maareeyaan xaruntooda xogta waxayna bixiyaan xalka martigelinta isku-omegga.
3. Marti gelinta Websaydhka Degdegga ah / Xawaaraha ugu Wanaagsan
Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Qlobal ~ 500 ms
Dhamaan qorshayaasha Turbo (mart gelin wadaag ah) ama ka sareysa Dhamaan qorshayaasha Qlobal ~ 500 ms
Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Qlobal ~ 200 ms
Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Mareykanka & Aasiya ~ 700 ms
Dhamaan qorshayaasha Kaliya martigelinta WP ee Maareeya Haa laakiin u baahan qaabeynta gacanta ABŞ & AB ~ 450 ms
4. Bogga ugu Fiican ee Martigaliyayaasha
Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha Dhamaan qorshayaasha
VPS və ya sareeya VPS və ya sareeya VPS və ya sareeya
VPS və ya sareeya VPS və ya sareeya VPS və ya sareeya VPS və ya sareeya
Talo: Ma dooneysaa jawi horumarineed oo gaar ah oo ku saabsan martigelinta la wadaago?
Marti gelinta Node.js A2 Hosting-də aylıq $ 3.70 / ay.
İnta badan martigaliyaiyaafaaydaydadu ma bixiyaan mum badan oo ku saabsan habka aaladaha horumariyaha loogu talagalay koontada martigelinta la wadaago. A2 Marti-gelinta və Interserver və ya ka-reebitaan üçün eyni və eyni. VPS’nin köklü qaraciyər VPS, pis vəziyyətə düşməsi və ha habeyn karo.
Martkan-gelinta A2 / Halkan guji si aad u booqato Interserver.
5. Ugu Fiican Ganacsiga Yar-yar-Dhexdeeda
Aan isku dayno Kayadta WordPress və Fiican Adeegsadayaasha Sare: Kinsta, SiteGround
WordPress ilə tanış olmaq və həvəskarlar üçün ən yaxşısı olan WordPress. Ogaanshaha tan, martigaliyayaasha websaydhadu waxay sidoo kale bixiyaan noocyo kala duwan oo ah qorshayaal iyo astaamo u gaar ah WordPress-ka sida qalabka mum lagu kariyo. Qorshayaasha loo maareeyay WordPress waa xulasho wanaagsan kuwa doonaya gacan hagis. Waxaa jira qaar ka orta ah martalyaiyaasha sidoo kale leh khabiiro WordPress ah sida shaqaalaha taageerada.
ŞirkətMaamulaha WordPressTaageerada Khabiirka WPAstaamaha WordPress və Gaarka ah
BoldGrid – Bog WordPress dhisay
Səhnələşdirmə, WP-CLI, A2 Optimallaşdırılmışdır – plagin və ya loogu talagalay waxqabadka ugu fiican
Marti gelinta Websaydha və Fiican Qorayaasha: GreenGeeks, Soo dhaweynta, TMD Hosting
Tusaale – Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa kaliya $ 0.80 / ay – Waa kufiican kuwa madaxa-bannaan ee u baahan degel deg deg ah.
Qoraayaasha, qapıashada marti-geliyaha websaydh ee wakhtiga badbaadiya ayaa ah mudnaanta koowaad. Dhisme si sahlan loo adeegsado (dhisa oo hagaajiya degel deg deg ah), websaydh (si aad ula xiriirto macaamiisha iyo daabacayaasha), iyo qiime qiime jaban (ganacsigaaga aasaasiga ah ayaa wax qoraya) waa seddexe ugui.
ŞirkətQiimaha ^ Dhismo Goob FuddLiistka
8. Adeegyada bilowga ah ee martigelinta-bilowga ah
Kufiican dada-dheer: A2 Hosting, InterServer
Milkiilayaasha websaydhadu waxay ogyihiin in maalgashiga bilowgu uu yahay kaliya qayb ka orta ah qiimahooda guud. Tan waxaa u səbəbi arimo kaladuwan sida qiimaha martigalinta. Bixiyeyaasha martigelinta websaydhada badankood waxay bixiyaan qiimo-dhimis saxeex ah oo ay adag tahay in laga hor tago. Si kastaba ha noqotee, qiimayaashu si aad ah ayey kor ugu kacaan markii la gaaro cusboonaysiinta qorshahaaga. Markaad tirineyso qiimaha suuragal ee mart-geliyaha websaydhka, maskaxda ku hay tan qayb ka orta ah qorshayntaada.
ŞirkətSaxiixida ^ Yeniləmə Zəmanəti
$ 3.99 / ay $ 9.99 / ay 90 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 4.00 / ay $ 4.00 / ay 30 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 3.95 / ay $ 11,95 / ay 30 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 5.95 / ay $ 14.95 / ay 30 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 2.15 / ay $ 11,95 / ay 30 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 3,92 / ay $ 7.99 / ay Markasta oo lacag dib loo soo celiyo
$ 4.95 / aydır $ 7.95 / aydır 30 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 60.00 / ay $ 60.00 / ay 30 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 27.00 / ay $ 27.00 / ay 100 maalmood tijaabo bilaash ah
$ 29.00 / ay $ 29.00 / ay 30 maalmood tijaabo bilaash ah
Xusuusin – Qiimayaasha ku saleysan Xilliga-sanadka is-qorista 2
Marti gelinta Websaydhka Shaqsiyeed və Fiican: GreenGeeks, Soo dhaweynta, TMD Hosting
Sida marti-gelinta qorayaasha, degel websaydh shakhsiyeed waa inuu noqdaa orta la awoodi karo oo si fudd loo isticmaali karo. La Daabaco-da ay tahay in CV-gaaga ama kor u qaadista ‘astantaada shakhsiga ah’ – Dhisme si sahlan loo isticmaali karo, astamaha websaydhka, iyo qiime-dhimista la awoodi karo ayaa ah kuwo ahad muhiim geliyaha websaydhka shaqsiyeed.
Kuwa martigelinaya kaliya hal degel internet, Hostinger wuxuu bixiyaa xalka ugu jaban ($ 0.80 / ay diiwaangelinta). TMD Hosting və ya GreenGeeks mumi bixiyaan mumi qanaxma və lakayin mumi martigeliyaan xadidneyn waxayna bixiyaan taageero macaamiil ya wanaagsan.
İstiğmaalayaasha Boqortooyada’nın Fiçikalı Martı Günü: Kinsta, SiteGround
Si loo fahmo waxa ka dhigaya websaydhka ugufiican goobta gaar ah, waxaan ubaahanahay inaan ka wada hadalno qarsoodi.
Waa maxay qarsoodi?
Waqti dhegeysiga waa waqtiga ay e egtahay adeegaha helitaanka iyo socodsiinta codsi-eynieye.
U tixgeli sida duulimaadka – Marka isticmaaleyaasha Ingiriisiga ahi ay galaan degel internet in le Avstraliya, codsiyadiisu waxay ka duulaan İngiltərə – Bariga Dhexe – Aasiya – Avstraliya – Aasiya – Bariga Dhexe – İngiltərə si ay natiijada ugu soo noganan. Waqtiga duulimaadka ayaa ah daahida shabakadaas.
Haddii boggaas gaarka ah lagu abaabulo İngiltərə, codsiyada waxay ku duha lahaayeen gudaha İngiltərə oo keliya, iyadoo la yareynayo waqtiga safarka.
Si aad u aragto sida daahfurnaanta ay ugu dhacdo nolosha dhabta ah, waa tan tusaale.
Sannado kahor boggan aad aqrinaysid waxaa lagu martigaliyay xarun xog ku taal Mareykanka. Waxaa ku yaal xawaaraha goobta lagu tijaabiyey 10 goobood oo la adeegsanayo Bitcatcha.
Sawirka shaashadda, waxtiga jawaabta server-ka ay ku kala duwan yihiin meesha iyo meesha. Goobtu si dhakhso ah ayey ugu dheertahay (8ms) oo loogu talo galay budada tijabada ah ee Maraykanka isla markaana tartiib tartiib ahey ugudambeysay qeybaha imtihaanka ee Yaponiya ilə Avstraliya (367ms 414 ms).
Meesha u dhaw dhagaystayaashaadu waxay kujirtaa serverkaaga, daahsoonida hoose waa.
Maxaa loo baahan yahay la daahida?
Enlem vea qayb gaar ah oo ka mid ah wakhtigaaga soo dejinta boggaaga. Adoo hagaajinaya daahitaanka (qapısında inaad martigeliso meel u dhow dhagaystayaashaada), waxttigaaga websaydhku wuxuu si aad ah u fiicnaanayaa
Si kale haddii loo dhigo, haddii dhagaystayaashaada badankood ay ku yaalliin isla waddanka ama gobol, waxaa ugu wanaagsan in a mart martigeliso websaydhka kuugu dhow.
Tani waxay sharraxaysaa səbəbə dəhidu ay muhiim u tahay markaad dooraneyso websaydh.
Xubinteyda kooxdu waxay ku eynieyeen falanqayn gecikmeye gecikmek qa ka orta ah shirkadaha martigeliya xarumaha leh xarumaha xogta ee ku yaal Boqortooyada Midowday oo aan u qiimeeyo iyaga oo ku saleynaya qiimaha, astamaa, yaahid. Aasaaska natiijooyinkiisa imtahanları, SiteGround – server və ya fadhigeedu yahay London, waxay ka mid ahayd kuwa martida loo ahaa xawaare sare. Google, Google Cloud ee London-a göndərilən server və ya şaqeysaa (və ya daha çox xaqiijiyay).
Veb Host Yerləşdirmə yeri Cavab Vaxtı
Saytın ətrafı London Xanım 34 Xanım 101
PickAWeb Enfild Xanım 35 Xanım 104
Internetka Wadnaha Leeds Xanım 37 Xanım 126
HostingUK London, Maidenhead, Nottingem Xanım 41 Xanım 272
Degdeg Deg Deg ah Gloucester Xanım 59 Xanım 109
tsoHost Maidenhead Xanım 68 Xanım 582
eUK Hoyga Wakefield, Maidenhead, Nottingem Xanım 34 Xanım 634
12. Waxa ugufiican Websaydhada Malaysiya & Küveq Sinqapur
Sababtoo ah bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan – Waxa aniga iigu fiigu
Sababtoo ah bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan-Waxa aniga iigu fiican aniga ma